February 2016 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 11:59:00 PM 0
ယခင် ဘားရှင်းမှာ Cleaning Virus မှာ ကြာနေတဲ့ ပြဿနာ ကို ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
Virus Packages အသစ်တွေ ထပ်တိုးပေးထားပါတယ်။
Wifi မျပျက်အောင် သေချာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်
Download Here: Ghost Push Killer PRO v 2.3
1. ယခု Application ကို Window OS ပေါ်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. အသုံးပြုမည့် Window PC တွင် Miscrosoft Dot Net Framework 4.5 Install ပြုလုပ်ထားရမည်။
3. Application ကို Run As Adminstrator ဖြင့်သာ အသုံးပြုရမည်။
4. Virus သတ်လိုသော device ကို Root ဖေါက်ထားရမည် ။
Tool မှ root access ရကြောင်းပြသော်လည်း system R/W မရလျှင် Virus သတ်လို့မရပါ။
MTK android ဖုန်းများထဲမှာ Firmware ကို Miracle box(Crack) ဖြင့် BOX မသုံးဘဲ (Scatter Firmware) backup ဆွဲထုတ်နည်းလေးပါ..
Min Oaker at 6:38:00 PM 0
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ တော်တော်လေးတောင်းဆိုနေကြလို့
မအားတဲ့ကြားကနေ အချိန်ပေးပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကဲအရင်ဆုံး Miracle Tool Box (crack) 2.26 ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
ရှိနေရင်တော့ မဒေါင်းပါနဲ့ .မရှိသေးသူများအတွက်ပါ..
Download Steup (72.9)MB >>> http://sh.st/EXkYg
Download Loader (1.6) MB >>> http://sh.st/WwDxf
MTK Firmware Backup with Miracle Crack
PDF (1.9) MB >>>> http://sh.st/EXlBp
Download ဆွဲပီးရင် မြင်ရမယ့်ပုံစံနဲ့ ဆိုဒ်ပါ ..
ကဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်ထဲက Steup ကို ဖြည်ချပီး
install လုပ်ပီးတာနဲ့ Finished မနှိပ်ပါနဲ့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း
အမှန် ခြစ် ၂ ခုဖြုတ်ပီး finished နှိပ်ပါ..
ကဲ ပီးရင် Loader ကို ဖြည်ချပါ.. အောက်ကပုံအတိုင်း
ဖိုင်2ဖိုင် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်..
2 ဖိုင်လုံးကို Copy ကူးပီးC/Prgram File/Miracle Box ထဲ
သွားထည့်ပါ . (Paste ပေါ့) နားမလည်ရင် အောက်ကပုံတွေ
ဒီလို ဖြစ်နေရမယ်နော် ဖိုင်ထဲမှာ Paste လုပ်ပီးပါက
ပီးရင် Loader ကို ပဲ ဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Loader ကို
Dastop ကို shortcut အနေနဲ့ ပို့ပါမယ်.
မပို့လည်း ရတယ်နော် .. ဒါပေမယ့် ဖိုင်ဖွင့်တိုင်း
C/ ထဲ လာရှာနေရမှာမို့ပါ. အောက်ကပုံအတိုင်း
ကဲ ပို့ပီးသွားရင် တော့ ဒီလိုမျီုး Miracle3ခု ရှိနေတာ မြင်ရပါမယ်
ဘာပဲ မြင်မြင် Loader ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့ ဟာကိုပဲ ဖွင့်ရမှာပါ..
ဖွင့်လိုက်ပါ.ပီးရင် MTK Tap အောက်က Read ကိုရွေးပါ .
ပီးရင်တစ်ဆက်တည်း Save as scatter ကိုပါ အမှန်ခြစ်ပေးပါ.
ပီးရင် Start ကို နှိပ်ထားပါ..
Waiting အနေနဲ့ ပြပီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ.
ပီးရင် Vol Up ကို ဖိပီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ကြိုးထိုးပါ..
100 ပြေးတက်လာရင်တော့ Vol Up ကို လွှတ်လို့ရပါပီ.
အောက်ပါအတိုင်းတက်လာပါလိမ့်မယ် .. ok နှိပ်ပါ
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Firmware ကို သိမ်းရမယ့်နေရာ
ရွေးခိုင်းတာပါ . ညီအကိုတို့ အနေနဲ့ ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ
သိမ်းလို့ နိုင်ပါတယ်. တစ်ခုပဲ ရှီပါတယ် သိမ်းမယ့်နေရာမှာ
တခြား Firmware တွေ မရှိဖို့ လိုပါတယ် ရောသွားမှာစိုးလို့ပါ.
ကျနော်ကတော့ dastop မှာပဲ ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်..
ရွေးပေးပီးသွားရင်တော့ ok ပေါ့ဗျာ..
အောက်က ပုံအတိုင်း backup ယူနေပါလိမ့်မယ်
ကဲ Saving as Scatter file ဆိုတာလေး နဲ့ Done
ဆိုတာလေး မြင်ရင်တော့ Firmware backup ထုတ်ခြင်း
ဒါကတော့ firmware ပါ...
firmware က model Name နဲ့ လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး
MTk ရဲ့ CPU name အနေနဲ့လာတာပါ..
အဲ့တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် model name ပေးပီး
folder အသစ်ဆောက်ပီး firm ware ထည့်လိုက်ပါ..
Huawe G730 U00 IMEI Null Error Fix & Fix With Error Of 3G Lost By Min Oke Kar
Min Oaker at 6:23:00 PM 0
Coolpad 7270 Display Error Fix File (5.0) MB 100% Test By Min Oke Kar
Min Oaker at 6:20:00 PM 0
Coolpad 7270 Display Error Fix လေးပါ
Thiha Htike at 4:30:00 PM 0
Android Phone တစ်လုံးရဲ့ eMMC File တွေ…၊ Block backup တွေကို ဒီ Tool အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Qualcomm ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အထူးရေပန်းစားလှတဲ့ Block0backup ကို ဒီ Tool အသုံးပြုပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
Facebook တွင် fr လုပ်ရန်
Thiha Htike at 4:29:00 PM 0
Network Unlock လုပ်တာ
Firmware တင်တာ အစရှိသဖြင့် လုပ်လို့ ရတဲ့ Software Box ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု Software ကတော့ Crack Version ဖြစ်တဲ့ အတွက် Box မလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Box မပါပဲ Software အသုံးပြုလို့ရမယ့် Install ပြုလုပ်နည်းကိုတော့ အောက်ပါ Link မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယခု Z3X Samsung Tool PRO ရဲ့ Crack ဖိုင်နဲ့ Setup ဖိုင် ၂ ခုလုံးကို MPPG Website မှ တိုက်ရိုက် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Khant Phyo Win at 2:36:00 PM 0
Anonymous at 11:36:00 PM 0
Khant Phyo Win at 2:21:00 PM 0
Anonymous at 1:34:00 PM 0
Link Password = GoogleSharing
Rar Password - GoogleSharing
ref - http://googlesharing1.blogspot.com/
Khant Phyo Win at 9:59:00 AM 0
ကဲ ကျနော်တို့ရဲ့ Smart-7 ရဲ့ Mobile ဖုန်းပြုပြင်သင်တန်း တန်းခွဲ အပတ်စဉ် (3) Section A ကို (8.3.2016)ရက်နေ့ကနေ စပြီး တက်ရောက်နိုင်ပါပီဗျာ...
Min Oaker at 2:40:00 AM 0
ကဲ ကျနော်တို့ရဲ့ Smart-7 ရဲ့ Mobile ဖုန်းပြုပြင်သင်တန်း
တန်းခွဲ အပတ်စဉ် (3) Section A ကို (8.3.2016)ရက်နေ့ကနေ စပြီး
ကွန်ပျူတာ အခြေခံမရှိသူများကတော့ 8 ရက်နေ့ကို အရောက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီတစ်ဖြတ်ကတော့ ကျနော်တို့ သင်္ကြန်ကာအတွင်း မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့
ရေ၀င်၊ မှန်ကွဲ၊ ရှော့ကျ၊ စသည့် စသည့် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ဖြစ်များသော
Error များကို အထူးသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကျနော်တို့ သင်တန်းရဲ့ သင်တန်းသားတွေအပေါ် သင်တန်းပီးဆုံးသွားသော အခါ
သင်တန်းသားတွေ Service လုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲ မရှိစေရန်အတွက်.
Facebook မှာ Group လေးတစ်ခုထောင်ထားပါတယ်. but Serect Group ပါ.
သင်တန်းသားတွေသာ ၀င်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Group ထဲမှာ လိုချင်တဲ့ Firmware
. ရှင်းလို့ မနိုင်တဲ့ Error တွေ ကို တောင်းဆိုခွင့်မေးခွင့် ရှိမှာပါ Firmware မျာကိုလည်း အချိန်မရွေး
လာရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်... Group လေးတစ်ခု ထောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင်တန်းသားတစ်ယောက်ဆီ
မှ Error ကိုလည်း သိခွင့်ရှီမှာဖြစ်သလို ထိုသင်တန်းသားတစ်ယောက်အတွက် ဖြေရှင်းပြလိုက်သော
Error Solution ကိုလည်း တခြားသင်တန်းသား များစွာ က လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါကတော့ သင်တန်းပီးသွားတဲ့အခါ ကျနော်တို့ Smart-7 Mobile ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော အပို့င်းဖြစ်ပါတယ်.
အသေးစိတ်ထပ်မံ ဖတ်ရှုလိုပါက ကျနော်တို့ ရဲ့ Smart-7 Facebook Page တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Smart-7 Mobile Service & Training Centre မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..
Error Solution နှင့် ရှားပါး Firmware များ Display Fix များကိုလည်း တင်ပေးနေတဲ့ Page လေးပါ.
ဖုန်းနံပါတ် >> ၀၉၄၂၀၇၆၃၅၀၀၊ ၀၉-၄၄၀၄၉၅၅၅၈ ၊ ၀၉-၄၄၀၄၉၅၅၅၉
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းချင်သူများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပီ.... စာရင်းပိတ်ရက်ကတော့(8)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပီး စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Min Oaker at 2:30:00 AM 1
Hisense HS-U961 Backup Flashtool Firmware လေးပါ
MT-6572 chip အမျိုးအစားသုံး ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Download (491.39) MB
credit >> www.ngaluu.com
Telenor T200M IMEI Null Fix Backup File Ready To write with mtk droidtool .(67)KB
Min Oaker at 2:22:00 AM 0
Mtk Droidtool နဲ့ ရေးရမှာနော်
Telenor T200M IMEI Error Fix (17) KB
Qualcomm များ အတွက် emmc data raw image များ ကို backup and restore လုပ်တဲ့ tool
Anonymous at 11:22:00 PM 0
- Qualcomm HS-USB 9006 / Qualcomm MMC Storage
- Generic Mass Storage Device such as E-mate Box
[download] EMMC RAW TOOL
EMMCRAW tool v1.4.rar
EMMC RAW TOOL v1.3.rar
Video: Video tutorials, Update eMMC Raw Tool Read Partition
Video tutorials, Update eMMC Raw Tool Read Partition.mp4 11.7 MB
Anonymous at 11:51:00 AM 0